Oh.. My Blog!: April 2007
Posted by Tesla at 5:04 PM | Links to this post
Posted by Tesla at 11:09 AM | Links to this post
ရိုးသားခြင်း ဖြူစင်ခြင်း နဲ့
ချစ်ခြင်း၊ ပျော်ရွှင်ခြင်း နဲ့ အောင်မြင်ခြင်း တွေရှိပေမဲ့
မုန်းခြင်း၊ ၀မ်းနည်းခြင်း နဲ့ ကျရှုံးခြင်းတွေ လည်းပြန်ဖြစ်လာမှာတဲ့..
အံ့မခန်း နည်းပညာတွေ ရှိပေမဲ့
တောင်တွေ ချိုင့်ဝှမ်းတွေ ပြည့်နေတယ်
ရယ်သံတွေ ငိုသံတွေက လေထုထဲမှာ ကြိတ်ကြိတ်တိုးတုန်း..
အမဲလိုက်ကပွဲ ဆင်နွဲ နေတဲ့ တောအုပ်ကြီးလည်းရှိတယ်
ပန်းတွေက မကြွှေခင်အထိတော့ လှပစွာပွင့်တုန်း..
အမြင်တွေနဲ့ ယုံကြည်မှုကို အသက်သွင်းထားတဲ့
အရာဝတ္တု တခုစီတိုင်းမှာ ကုန်ဆုံးရက်စွဲတွေ သေသေချာချာ ကပ်ထားတယ်
ပုပ်သိုး ဆွေးမြေ့မှုတွေက ဒေါင့်တနေရာမှာ လျစ်လျူရှုခံရတုန်း..
ဒေါသ၊ လောဘနဲ့ မောဟတွေကို တလှဲ့စီ စားသုံးတယ်
နွားတွေက ဆီဆုံကိုအထပ်ထပ်ပတ်ပြီး ကြိတ်တုန်း..
ဟိုဘက်မှာတော့ တခုပဲ ရှိတယ်..
Posted by Tesla at 8:12 PM | Links to this post
သူ့အကြောင်း ကိုယ့်အကြောင်း (ဒေါက်တာစိုးအောင်)
ဧည့်သည်တယောက်နှင့် စကားပြောရလျှင် ကျနော့်အကျင့်မှာ သူတို့အကြောင်း ဦးဆုံးမေးတတ် ပါသည်။ မေးတစ်ခွန်း ဖြေတစ်ခွန်း ဖြစ်နေလျှင်တော့ ဧည့်သည်ကို တရားခံစစ်စစ်နေတာမျိုး ဖြစ်လာတတ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကျနော့်အကြောင်း ပြောင်း၍ ပြောတတ်သည်။ သူ့ဘက်က စကားလိုက်မလာပြန်လျှင် ကိုယ့်အကြောင်းချည်း ဆက်ပြောနေလို့ မဖြစ်ပြန်။ ထိုအခါ သူ့အကြောင်းမဟုတ်၊ ကိုယ့်အကြောင်းမဟုတ်၊ အားလုံးနှင့် ဆိုင်တာကို ကျနော်ပြောဖြစ်ပါသည်။ စာရေးတော့လည်း အလားတူပင်။ သူ့အကြောင်းပြောဖြစ်သည်၊ ကိုယ့်အကြောင်းပြောဖြစ်သည်။ အားလုံးနှင့် ဆိုင်သည့် အကြောင်းကိုလည်း ပြောဖြစ်သည်။ ပြောမိသမျှ အားလုံးသည် “တကယ်ဖြစ်နေတာ” ချည်းတော့မဟုတ်။ “ဖြစ်ချင်တာ” တွေကို ပြောနေသည်က ပိုများသည်။ ထို့ကြောင့် ကြားရသူအတွက် တစ်ခါတစ်ရံ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေ ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နေတတ်သည်။
နေရူး၏ ၁၉၆၂ ခုနှစ်ထုတ် Autobiography စာအုပ်၊ စာမျက်နှာ ၅၉၆ ၌ပါသော အောက်ပါစာကြောင်းလေးကို နှစ်သက်စိတ်ဖြင့် အကြိမ်ကြိမ် ဖတ်မိပါသည်။
“Perhaps what I have written is not much an account of what I have been but of what I have sometimes wanted to be or imagined myself to be.”
ကျနော် ပြောချင်သည်မှာ “ သူ့အကြောင်းဆိုတာလည်း ကိုယ့်အကြောင်းပါပဲ။ ကိုယ့်အကြောင်း ဆိုတာလည်း သူ့အကြောင်းပါပဲ။ သူ့အကြောင်းမဟုတ် ကိုယ့်အကြောင်းမဟုတ် ဆိုတာကတော့ ကျနော်တို့တွေ အားလုံးရဲ့ နှလုံးသားထဲကလာတဲ့ဆန္ဒတွေပါပဲ။
၂၀၀၇ ဖေဖ၀ါရီလ ထုတ် စပါယ်ဖြူ မဂ္ဂဇင်းမှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
Posted by Tesla at 8:03 PM | Links to this post
“မင့်ကိုကြည့်ရတာ အခုပဲ အငွေ့ထပျံတော့မဲ့ ပုံစံနဲ့”ဆိုလို့ နှင့်ဆီကို စာထပ် ရေးလိုက်တယ် ဒိုင်ယာရီ… အားတော့နာပါရဲ့ စိတ်တွေ အစာမကြေတိုင်း နင့်ဆီကိုလာလာပြီး အံချရတာကို.. အံဖတ်တွေထဲမှာ သွေးညှီနံ့ တွေတော့မပါလောက်ပါဘူး ကြောက်ရွံမှု တချို့ တရားကျမှု အတွေးတွေနဲ့ အထီးကျန်မှု တွေကသာ အချိုးမကျတကျ ပါနေပါလိမ့်မယ် ဒိုင်ယာရီရယ်… ဒါပေမဲ့ လှတပတ ဖြစ်အောင် အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ ငါရောစပ်ထားပေးပါတယ်… ဒီရေဆိုတာ တက်ပြီးတော့ ပြန်ကျသွားတာ ဒါထူးဆန်းလားတဲ့…. ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း မလုပ်ဖို့ ပဲငါပြောတာပါ….. ငါ့နှလုံးက သိပ်မကောင်းဘူးလေ….. မိုးရွာထဲမှာ ထီးမပါဘဲ လမ်းလျှောက်ရတာ အရသာတော့ ရှိပါရဲ့ ဒါပေမဲ့ မိုးကြိုးမပစ်အောင် ဆုတောင်း နေရတာ တခါတခါ သိပ်မမိုက်ဘူး….. မိုးဆက်တိုက်ရွာရင်လည်း အအေးမိနိုင်တယ်မဟုတ်လား….. ခန္ဓာကိုယ်ဆင်းရဲမှ ၀ိဥာဉ်ထက်မြက်မှာ ဟုတ်လား.. ကဲပြော.. ၀ိဥာဉ်ဆင်းရဲခံရင်ကော ခန္ဓာကိုယ်ကထက်မြက်အုံးမှာလား….. တချက်တချက်ဆို မြေမြုပ်ထားတဲ့ အတောင်ပံတချို့ က ရှင်ပြန်ထမြောက်ချင်နေသေးတယ်… မာလာငွေ ကန်ရေအေး နဲ့ ဌက်တေးက ဘယ်တော့မှလာမှာလည်း….. စောင့်နေတာ မိုးမရွာတဲ့ ရာသီ ခြောက်ခါတောင်ရှိပြီ…… မိုးရယ်ရွာပါတော့….. အခွင့်ရေးရရင်တော့ သွားမေးဦးမယ် ကယ်တင်ဖို့အတွက် များဘာလို့ သက်သက်ဖန်ဆင်း တာလည်းလို့.. ဒီမှာဖြင့် ကစားကွက်ထဲမှာ ပြူးလို့ ပြာလို့… ရှုပ်နေတာပဲ.. ကိုမျိုးကျော့ရဲ့ လူဖြစ်ရတဲ့ ဒုက္ခက ဟောဒီနားထဲကကို မထွက်ဘူး….. ဒိုင်ယာရီရယ်.. တတိယအဆင့် ရုန်းထွက်ခြင်းဟာ အသုံးဝင်ပေမဲ့ လို့ နေ့တိုင်းဖြစ်ဖို့ ခက်ခဲလှတယ် ခက်မှာပေါ့လေ နောက်ဆုံးအဆင့် မဟုတ်လား… ဖြစ်နိင်ရင် မော်ဖင်းကို ဒရစ်ပ် ချိ်တ်ပြီး အတောင်ပံတစင်းနဲ့ အေးအေးငြိမ့်ငြိမ့် မိုက်မိုက်ကန်းကန်းပဲ ဒီဘ၀ကို အဆုံးသတ်ပြစ်လိုက်ချင်တာ…… အော်.. လူ့ဘ၀ကို ဘယ်လို လျှောက်လှမ်း ရတယ် ဆိုတာ ငါအခုထိ မရိပ်မိသေးဘူးကိုး… ဒိုင်ယာရီရေ တကယ်ပါ ငါ အနန္တကို မလိုချင်ဘူး.. ကြာသာပတေး ကိုလည်းမလိုချင်ပါဘူး. ငါ့ဘ၀ကို ပဲ ငါ့ကိုပြန်ပေးပါ.....
Posted by Tesla at 2:25 PM | Links to this post